Quicklink - အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Tag Archives: Quicklink
IBC 2019 မှာပြသခံရဖို့ Quicklink ရဲ့ All-In-One ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်
IBC 2019 မှာ Quicklink ဖယ်ရှားရာမှာ Panasonic က PTZ ကင်မရာနဲ့အတူစတူဒီယို-in-a-box ကို (ST500) ကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ All-In-One ခရီးဆောင်ယူနစ်နည်းပညာဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များကိုမရရှိနိုင် On-site ကိုအဲဒီမှာကန့်သတ်ထားရာ HD ကိုစတူဒီယိုထုတ်လွှင့်ပံ့ပိုးမှုများကိုထွက်ရှိသောသင့်လျော်သည်။ Panasonic ကအတူ ပူးပေါင်း. ဖန်တီးခဲ့ကြောင်းဖြေရှင်းချက် 22x optical zoom နဲ့အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အပြည့်အဝ HD ဗီဒီယိုထောက်ပံ့ထားတဲ့ဘက်ပေါင်းစုံစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် Panasonic က PTZ ကင်မရာတပ်ဆင်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ...
ပြင်သစ်3Bigflo & Oli ဖျော်ဖြေပွဲများအတွက် Quicklink စတူဒီယိုလက်ခံ
ပြင်သစ် 3, ပြင်သစ်ရုပ်မြင်သံကြားအုပ်စုတစ်စု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အကြီးဆုံးပြင်သစ်လူထုရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများတမကြာသေးမီက Bigflo & Oli ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုပေါင်းစုံကကင်မရာရဲ့ Facebook တိုက်ရိုက်များအတွက် Quicklink စတူဒီယိုဖြေရှင်းချက်ကိုအသုံးပြုကြသည်။ အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲ Toulouse, Bigflo & Oli ကြီးပြင်းခြင်း, နှစ်ခုကျော်ထက်ပိုမို 60,000 ပရိသတ်ကကြိုဆိုရှိရာမြို့မြို့၌ကျင်းပခဲ့သည် ...
AzamTV တိုက်ရိုက်သတင်းစုရုံးမှုအတွက် Quicklink မိုဘိုင်းကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာချမှတ်
AzamTV, တန်ဇန်းနီးယားတွင်အခြေစိုက်တိုက်ရိုက်-to-အိမ်မှာရုပ်မြင်သံကြား subscription ကိုဝန်ဆောင်မှု, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသတင်းစုရုံးများအတွက် Quicklink မိုဘိုင်းကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာမွေးစားပါပြီ။ AzamTV subscriber များအားအားကစား, ရုပ်ရှင်, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, ကလေးတွေ, လူနေမှုပုံစံစတဲ့, ဂီတ, သတင်းနှင့်ရေဒီယိုအတွင်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖျော်ဖြေရေး၏ကျယ်ပြန့ပေးထားပါတယ်။ တိုက်ရိုက်သတင်းစုရုံးဘို့, AzamTV တောမှ uplink များအတွက် LTE ကို SIM ကဒ်များနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ Quicklink မိုဘိုင်းကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာရဲ့တပ်ဆင်။ အဆိုပါ feeds တွေကိုဖြစ်ကြသည် ...
Quicklink စတူဒီယိုပြင်သစ်, ပိုလန် & မော်ရိုကိုတို့အကြား Veolia စာနယ်ဇင်းနေ့ကအာဏာ
အဆိုပါ Quicklink စတူဒီယိုဖြေရှင်းချက်အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီ Veolia များအတွက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနေ့ရက်ကာလ၌အသုံးပြုသောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖြေရှင်းချက်ပိုလန်, Le Mans အခြေစိုက်မော်ရိုကိုနှင့် Veolia အတွက် Renault ကစက်ရုံအတွက် Volkswagen ကစက်ရုံမှ, ပဲရစ်အခြေစိုက်စာနယ်ဇင်းနေ့ကပရိသတ်ကိုချိတ်ဆက်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ Havas ပွဲအေဂျင်စီ, ကူညီပေးဖို့ TBC အဖွဲ့မီဒီယာအပေါ်ကိုခေါ် Veolia ၏ရွေးကောက်တော်မူသောမိတ်ဖက် ...
အဆိုပါ Quicklink စတူဒီယိုဖြေရှင်းချက်အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကရဲ့ထိပ်ဆင့်အတွက်ကစားအခြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးကလပ်ကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစတူဒီယိုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဧည့်သည်စတူဒီယိုနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် Audio / Video အင်တာဗျူး link ကိုချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးပံ့ပိုးတဲ့ desktop သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကိရိယာကို SMS သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်ဖိတ်ခေါ်ထွက်ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါဘောလုံးကလပ် ...
tempo မုန်တိုင်းဝေးလံခေါင်သီအီလက်ထရောနစ်အားကစားပံ့ပိုးမှုများကို Quicklink စတူဒီယိုဖြေရှင်းချက်ကိုရွေးကောက်ပြီး
tempo မုန်တိုင်းတစ်ခုအမေရိကန်အီလက်ထရောနစ်အားကစားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းအဖွဲ့ casters နှင့်ကစားသမားများထံမှတိုက်ရိုက်ဝေးလံခေါင်သီပံ့ပိုးမှုများကိုများအတွက် Quicklink စတူဒီယိုဖြေရှင်းချက်မွေးစားပါပြီ။ 2014 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Tempo မုန်တိုင်း Hearthstone, မုန်တိုင်း၏သူရဲကောင်းများ, Warcraft ၏ကမ္ဘာ့ဖလား, ဖီဖာ, PlayerUnknown ရဲ့ပွို, Fortnite, စူပါတပ်များ Bros, Mele နှင့် Ultimate အပါအဝင်အီလက်ထရောနစ်အားကစားဂိမ်းတစ်ခုအရေအတွက်ပညာရှင်ပီသစွာယှဉ်ပြိုင်။ tempo မုန်တိုင်းယခုတစ်ခုဖြစ်သည် ...
Quicklink စတူဒီယိုဒယ်အိုး-ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲများအတွက်ဝေးလံခေါင်သီသော IP အသံဝေဖန်နိုင်ပါတယ်
အဆိုပါ Quicklink စတူဒီယိုဖြေရှင်းချက်အတော်ကြာဝေးလံသောနေရာများမှအအင်တာနက်ကျော်တစ်ပြိုင်နက် Ultra-အနိမ့်အောင်းနေချိန်အသံဝေဖန်ပေးမယ့်ဂုဏ်သတင်းဒယ်အိုး-ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာမကြာသေးမီကသုံးခဲ့သည်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲအင်အားအကောင်းဆုံးဥရောပအသင်းအဖွဲ့များ၏အမျိုးသားရေးလိဂ်ချန်ပီယံအားဖြင့်ကစားနေသည်။ Audioconsulting AG ကအဓိကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘောလုံးအသင်းအဖွဲ့များနှင့်အဘို့န်ဆောင်မှုပေးသည့်လွတ်လပ်သောအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်း ...
Quicklink TX Ravensbourne တက္ကသိုလ်လန်ဒန်နှင့်တော်ဝင်ရှိတ်စပီးယားကုမ္ပဏီအာဏာ
2018 အတွက်ကျောင်းများ '' အသံလွှင့်စီးရီး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, Ravensbourne တက္ကသိုလ်လန်ဒန်အဖြစ်တိုက်ရိုက်စတူဒီယိုမေးခွန်းတစ်ခုကိုလွယ်ကူချောမွေ့နှင့်ကျောင်းကျောင်းသားနှင့်တော်ဝင်ရှိတ်စပီးယားကုမ္ပဏီ (RSC) ၏သရုပ်ဆောင်များကိုအကြားအစည်းအဝေးများဖြေဆိုဖို့ Quicklink TX သုံးပြီးပါပြီ။ အဆိုပါ RSC ဗြိတိန်၌အမြင့်ဆုံးသော-ပရိုဖိုင်းကိုပြဇာတ်ရုံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းနှင့်အတူပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Quicklink Skype ကို TX ...
Quicklink စတူဒီယို-in-a-box ကို (ST4) နဲ့အသုံးပြု Blackmagic ဒီဇိုင်း DeckLink Mini ကို Recorder 500K
Fremont, CA - ဒီဇင်ဘာလ 19th, 2018 - Blackmagic ဒီဇိုင်း Quicklink, software နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲ IP ကိုဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးများထဲမှသည် Quicklink စတူဒီယို-in-a-box ကို (ST4 နှင့်အတူဖမ်းဆီးရမိသည် DeckLink Mini ကို Recorder 500K သုံးပြီးကြောင်းယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ။ ) ဤသည်ကိုအသုံးပြုခြင်း Blackmagic ဒီဇိုင်းရဲ့ DeckLink စတူဒီယို 4K, DeckLink Duo 2, DeckLink SDI 4K နှင့် DeckLink Mini ကို Recorder ၏ Quicklink ရဲ့လက်ရှိပေါင်းစည်းမှုပူးပေါင်းမည် ...
Quicklink IBC 2018 မှာဆုရ Quicklink TX တခုအဖြစ်မှ
IBC 2018 မှာ Quicklink သူတို့ရဲ့ဆုရ Skype ကို TX ခေါ်ဆိုခ transceiver တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Quicklink TX, Skype ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အနည်းပညာ & အင်ဂျင်နီယာတစ်Emmy® Award ဆုနှင့်အတူဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ ဤသည်အလျင်အမြန်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်လုပ်ငန်းများအတွက်ဘုရင်မကြီးရဲ့ Award ဆုဗြိတိန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အရှိဆုံးဂုဏ်သတင်းကြီးသောဆုနှင့်စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုအတွက်အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများနှင့်အတူနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ ပူးပေါင်းဒီဇိုင်း ...
Quicklink IBC 2018 မှာပွိုအရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရကမ်းလှမ်းရန်
Quicklink အဘို့, 2018 သည့် Skype ကို TX ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်လုပ်ငန်းတစ်ခု Queens ဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့်တစ်ဦး 15 နှစ်ကုမ္ပဏီနှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုလက်ခံရရှိနည်းပညာ & အင်ဂျင်နီယာတစ်Emmy® Award ဆု Quicklink နှင့်အတူဂုဏ်ပြုခံရခြင်းနှင့်အတူအခမ်းအနား၏တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်ရဲ့ IBC ရှိုးမှာ Quicklink က၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုမိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည် - ထို Quicklink စတူဒီယိုဖြေရှင်းနည်း။ အဆိုပါ Quicklink စတူဒီယိုဖြေရှင်းချက် ...
Quicklink နှင့် Riedel Skype ကို TX မိတ်ဖက်ကြေညာ
Quicklink မိုက်ခရိုဆော့ဖ် Skype ကို TX ဖြေရှင်းနည်းများကိုထောကျပံ့ဖို့ Riedel နဲ့ On-going မိတ်ဖက်ရဲ့ start ကြေညာဖို့ဝမ်းသာသည်။ မိတ်ဖက်ဖြစ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, Quicklink ယခုလက်ရှိ Riedel STX-200 Skype ကို TX ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုန်ဆောင်မှုများပေးလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သော hotline, ဟာ့ဒ်ဝဲပြုပြင်ရေးအဖြစ်အရောင်းဝန်ဆောင်မှုပြီးနောက်အာမခံ-In အဖြစ် Skype ကို STX-200 ထုတ်ကုန်အလိုတော်များအတွက်အာမခံထဲက ...
Quicklink Quicklink Skype ကို TX မိသားစုအတွင်းသာလွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြေညာ
Quicklink ထုတ်ကုန်များ၏ယင်း၏ Skype ကို TX မိသားစုနောက်ထပ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအရည်အသွေးနှင့်ခံနိုင်ရည်နှစ်ဦးစလုံးပိုကောင်းအောင်နောက်ဆုံးပေါ် hardware ပိုင်းတိုးတက်မှုနှင့်အတူတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်းယနေ့ကြေညာခဲ့သည်။ ဒီနှစ်ဟာသူတို့ရဲ့ 15 နှစ်နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကျင်းပသူအ Quicklink သည်, Quicklink Skype ကို TX မိသားစုအတွင်း Dual-Channel ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကမ်းလှမ်းရန်တစ်ခုတည်းသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဟာ့ဒ်ဝဲကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Quicklink TX, အ Skype ကို TX အင်ဂျင်ကိုထည့်သွင်း ...
Quicklink TX ဂလိုဘယ်လူငယ်များနေ့အဘို့အအတူတကွလူငယ်ချိတ်ဆက်ဖို့အသုံးပြု 2018
မတ်လ 17th တွင်, ဂလိုဘယ်လူငယ်များနေ့ 2018 ရာအရပျကိုယူ။ GYD အဘို့, သတ္တမ-day Adventist ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကမ္ဘာတဝှမ်းလူငယ်များ၏ဝန်ဆောင်မှု၏ပြုမူသောအမှုနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးရန်တစ် 24 နာရီထုတ်လွှင့်ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါတိုက်ရိုက်စီးစဉ်အတွင်းဥရောပတစ်လွှားကနေ 22 သတင်းထောက်တွေကို YouTube နဲ့ဂလိုဘယ်လူငယ်များနေ့ website တွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်မှလှူဒါန်းခဲ့သည်။ ဂလိုဘယ်လူငယ်များနေ့ (GYD) ...
Quicklink ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်လုပ်ငန်းများအတွက်ဘုရင်မကြီးရဲ့ Award ဆုကိုဆွတ်ခူး
Quicklink ဗီဒီယိုဖြန့်ဖြူးန်ဆောင်မှုများသူတို့ Quicklink TX ဖြေရှင်းချက်များအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကဏ္ဍ, လုပ်ငန်းများအတွက်ဘုရင်မကြီးရဲ့ Award ဆုလက်ခံရရှိကြောင်းကြေညာဖို့ဝမ်းသာကြသည်။ အဆိုပါဆုချီးမြှင့်ဗြိတိန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အရှိဆုံးဂုဏ်သတင်းကြီးသောဆုဖြစ်ပါတယ်နှင့်စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုအတွက်အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဆု HM ဘုရင်မကြီးအားဖြင့်နှစ်စဉ်လုပ်နေကြသည်သာအမြင့်ဆုံးပေးနေကြသည် ...
NAB SHOW ပွဲဦးထွက်စေ FIVE ဗြိတိန်ကုမ္ပဏီ
NAB 2018: - 40 ဧပြီလ 2018 ဗြိတိန်ကုမ္ပဏီများသည်ထက်ပိုမိုသော, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ငါးခု, ဗြိတိန် NAB ပြရန် 9, Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ, 12 မှာထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာနည်းပညာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးနောက်ဆုံးပေါ် feature ပါလိမ့်မယ်။ Tradefair, စုစည်းထောက်ခံပါတယ်နှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်ကိုယ်စားအဓိကနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုပြပွဲများတွင်ဗြိတိန်ကုမ္ပဏီများ On-site ပါဝင်မှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် ...
1 ၏စာမျက်နှာ 3123	»